Somalia Oil & Gas News Monitoring Kheyre iyo Farmaajo oo isku qilaafsan xil ka qaadista agaasimaha wasaaradda Batroolka – Somali Sounds
Somalia Oil & Gas News Monitoring in agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka JFS loo magacaabay si qarsoodi ah Karar Doomeey bishi May ee sanadkan 2018. Karar Doomey aya ka soo jeeda beesha Madaxweyne Farmaajo, wuxuuna ahaa agaasimihii seddexaad ee uu magacaabo kana soo jeeda beesha Madaxweyne Farmaajo.
Sida ay xogta ku heshay Somalia Oil & Gas News Monitoring waxaa xurguf weyn soo kala dhex gashay Karar Doomeey iyo RW Kheyre, waxaana xurguftooda ay bilaabatay bishii Febraayo ee sanadkan markii uu dhacay shirkii London ee lagu xaraashay kheyraadka Dalka.
Xurguftooda ayaa bilaabatay markii RW Kheyre uu u xilsaaray shirkadda SOMA-OIL iibgeynta shidaalka Soomaaliya, balse agaasimaha wasaaradda batroolka Karar Doomey aya ka biyo diiday in uu RW Kheyre u xilsaaro suuq geynta shidaalka Soomaaliya shirkadda SOMA-OIL ee uu saamiga ku leeyahay RW Kheyre.
Karar Doomey ayaa sidoo kale sheegay shirkadda SOMA-OIL ay leedahay oo kaliya hal (1) ceel oo ah kan ugu afka weyn oo cabirkiisa lagu qiyaasay 2KM oo isku wareeg ah ceelkaas oo ku beegan inta u dhexeysa Xarar Dheere & Hobyo. Halka RW Kheyre uu ku doodayo in shirkadda SOMA-OIL ay leedahay 8 block ama ceel iibgeyntooda iyo masuuliyadda ceelashaas.
Karar Doomey oo ah nin qabiir ku ah dhanka qodida shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah muddo dheerna u soo shaqeeyay shirkadda shidaalka ee dalka Norway, Karar Doomey waa la taliyaha gaarka ah iyo shaqsiga u qaabilsan arrimaha shidaalka MW Farmaajo.
Isku dhaca RW Kheyre iyo MW Farmaajo ayaa caawa gaaray meeshii ugu sarreysay kaddib markii RW Kheyre la yimid seddex qof oo u sharaxan jagada agaasimaha guud ee wasaaradda Batroolka taasoo MW Farmaajo ku noqoto filanwaa iyo argagax. RW Kheyre ayaa weli ku adkeysanaya in uu xilka ka qaado Karar Doomey maalmaha soo socda isagoo ku doodaya in uu gudanaayo waajibaadkiisa dastuuriga ah, balse ujeedka dhabta ah ee uu rabo RW Kheyre ayaa ah in aanan marnaba gorgortan uuna ka gelin arrinta shidaalka iyo shirkadda SOMA-OIL.
Waxaa maalinta berrito ah la ansixindoonaa sharciga shidaalka kaasoo RW Kheyre uu seddexdii maalmood ee la soo dhaafay uu ku bixinaayay balanqaadyo iyo lacag sidii sharcigaas loo ansixin lahaa si ay ugu xalaalowda iibinta kheyraadka shidaalka dalka.
RW Kheyre ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo uu u magacabaabo shaqsi cusub agaasimaha wasaaradda Batroolka, waxaana arrintan ka biyo diiday MW Farmaajo. RW Kheyre ayaa ka codsaday MW Farmaajo in aanu soo faragelin shaqadiisa, balse sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Somalia Oil & Gas News Monitoring MW Somalia Farmaajo ayaa ku amray RW Kheyre in aanu xil ka qaadi karin Karar Doomeey, iyadoo RW Kheyre iska dhaga tirayo hadalka MW Farmaajo.
Waddaniyada afka baarkeed ah ee Farmaajo
MD Farmaajo, waa muwaadin xaq u-leh inuu kursiga qabto, laakiin iilama muuqdo shaqsigii ku haboonaa maanta; sababaha soo socdo iyo kuwa kale oo badan ayaa igu dhalisay inaan ka qaato aragtidaan: 1- Farmaajo, isagoo ahaa shaqsi Qurba-joog ah oo Dalka muddo ka maqnaa ayaa Madaxweynihii Hore Sheikh sharif wuxuu siiyay fursad uu kaga mid noqdo […]
Professor Yahya Amir ayaa iyo Qurba Joogta Qaar !!!!! Qurba joogta Dollarka Jecel & kuwa Dalka jecel. Halkaan ka Daawo
Araar. walaalayaal, ha u qaadanina in aan idin necebahay, waxaa Qurbaha jira Saaxibadeey, walaalaheey, kuwo aan waalid u ahay iyo kuwo waalid ii ah. laakin in wixii khaldan la isku sheego ceeb ma ahan, haddii Shaatigaagu, meel ka jeexan yahay ama wasaq yari meel uga taal ee aan kuu sheego, Dhaliil ma ahan, ee waa […]